Uphika eyejezi 'lenhlanhla' uTruter weSwallows - Impempe
Uphika eyejezi ‘lenhlanhla’ uTruter weSwallows
February 21, 2021 February 21, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi weSwallows FC, uBrandon Truter
Uthi ijezi aligaxa emahlombe akusilona elimlethela izihlanhla zokuwina umqeqeshi weSwallows FC, uBrandon Truter. Usho kanje lomqeqeshi ngemuva kokuthi ezakhe zidlale ngokulingana neCape Town City emdlalweni weDSTV Premiership eKapa ngeSonto.
Uthi indaba yokugaxa ijezi emahlombe yaqalwa abalandeli beziNyoni ngesikhathi besadlala kwiGladAfrica Championship ngesizini edlule.
“Umgqigqo omuhle esaba nawo kwiGladAfrica Championship yiwo owenza abalandeli bakholelwe ekutheni yilo leli jezi eliletha izinhlanhla. Ngiyakhumbula nje komunye umdlalo ngingaligaxile sadliwa, babhoka kabi abalandeli kanye nabadlali imbala bethi bacela ngibuyise ijezi, sekwaba ukujwayela nje ukuthi ngiligaxe emahlombe akusho lutho.
“Ngikholelwa kakhulu kuNkulunkulu nokunguyena engikholwa ukuthi usilethela izinhlanhla, ngiyathandaza kakhulu,” kusho uTruter.
Akuyena lo mqeqeshi owokuqala kuleli ukuba nempahla yokugqoka okunenkolelo yokuthi imlethela inhlanhla. NoRuud Krol wayenehembe eli-pink ayeligqoka kuyo yonke imidlalo yeqembu ngesikhathi libutha izindebe.
UTruter uthe badlale kahle kakhulu ukube bekungekona nje okwezinqumo zikanompempe ebezingezinhle ngabe bawunqobile lo mdlalo.
“Lihle kakhulu iqembu lami, ngigculisekile ngendlela abadlali abezinikela ngayo, kwakhona nje ukuthi sibuye nephuzu ekuhambeni lokho kusho okukhulu ukuzimisela kubadlali bethu. Alikho iqembu esilisabayo manje kwiDSTV Premiership, amaqhinga ethu akhaliphile kakhulu singabhekana nanoma yiliphi iqembu manje, asinalo uvalo,” kwengeza lo mqemqeshi.
Njengamanje iSwallows isilele indawo yesithathu kwiPremiership kanti isiyoze ibhekane neTS Galaxy ngempelasonto ezayo eMbombela.
Email simphiwe@impempe.com – Twitter: @impempe_com
Previous Previous post: Iziyekele yona ukushaya inqwaba yamagoli iPirates iphiwe ihhewa koweCAF
Next Next post: Injabulo kuZinnbauer kubuya izinkunzi ze-Orlando Pirates